Vaovao - zavatra tokony ho fantatrao momba ny alikan'ny alikao
Zavatra tokony ho fantatrao momba ny alikan'ny alikao
Misy fihary hatsembohana ao am-pelatanan'ny alikao.
Ny alika dia mamoaka hatsembohana amin'ny faritra amin'ny vatany tsy rakotra volon'ondry, toy ny orona sy ny faladian'ny tongony. Ny sosona anatiny amin'ny hoditry ny alika dia misy fihary hatsembohana - mampihena ny alika mafana. Ary toy ny olombelona, ​​rehefa alika ny alika na miady saina, dia mety ho mando ny lambony.
Paw Pads mavokely rehefa alika kely
Matetika mavokely ny tongotry ny alika rehefa teraka, Rehefa mihalehibe izy ireo dia mihamafy ny hoditra ivelany misy ny takelaka, hiova ho mainty ny gadra. Matetika, ny lamban'ny alika dia fifangaroan'ny tasy mavokely sy mainty rehefa manodidina ny 6 volana. Midika izany fa mihamafy ny pad pad, ka afaka mihazakazaka sy mihazakazaka mankaiza izy ireo.
Trimming Ny hohony
Raha mikitika ny hoho alika rehefa mandeha izy na mora voafintina izy dia mila manaingo azy. Ny fantsika dia tokony zara raha mamakivaky ny tany, afaka mividy clipper hoho ho an'ny alikanao ianao. Ny ankamaroan'ny mpitsabo dia manolotra an'ity serivisy ity raha tsy fantatry ny tompony ny fomba anaovany izany. Ny volo eo anelanelan'ny pad pad dia miteraka fikolokoloana raha tsy voahaingo tsy tapaka. Azonao atao ny mametaka ny volo ary mandoko ka miaraka amin'ny pads aza. Zahao ny vatokely na potipoti-javatra hafa rehefa mametaka.
LickIng na mitsakoIng tongony
Raha milelaka ny tongotr'izy ireo ny alikao, dia mety ho tratry ny fahasosorana na olana amin'ny fitondran-tena toy ny fitaintainanana izy. ka milelaka ny lambany izy hanamorana ny toe-pony. Mba hanamaivanana ny fahasosorana, andramo alao ny alikao handehandeha, hihazakazaka na hiara-milalao aminao miaraka amin'ny alika hafa hampiasa hery ara-tsaina sy ara-batana bebe kokoa. Omeo kilalao tady azo antoka izy mba hampiala azy tsy ho eo amin'ny tongony.
Pads vaky na maina
Raha maina ny hoditry ny alikao, ny olana mahazatra amin'ny toetr'andro mangatsiaka kokoa rehefa mampihena ny hamandoana ao an-trano ny hafanana afovoany, dia mety ho vaky sy ho volo ny pads azy. Betsaka ny marika ara-barotra azo antoka sy azo antoka.